Bãi Kỳ Co Quy Nhơn | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Bãi Kỳ Co Quy Nhơn | Excitinghochiminhcity
Kuuya kuBai Ky Co Quy Nhon pano zvirokwazvo kuchakuunzira iwe kunzwa kunonakidza nerunako rwechisikigo. Iyi nzvimbo isarudzo yakanaka kwazvo yekuona zvisikwa nemhuri yese – nzvimbo yakaita seMaldives yeVietnam.
Ona zvimwe: Quy Nhon kufamba: Gwaro kubva kuA kuenda kuZ kwauri
1 Ky Co Beach – inzvimbo yekunyudza iwe mune inoshamisa runako rwechisikigo
2 Nzira yekuenda sei kuKy Co beach?
3 Chii chekutamba kuKy Co?
3.1 Ongorora Ky Co beach
3.2 Kudzika musasa pamhenderekedzo yegungwa
3.3 Join mabasa pamhenderekedzo yegungwa
3.4 Tarisa muSuoi Ky Co Lake, Hang Yen Bridge
3.5 Snorkeling kuona makorari
3.6 Eo Gio Travel
4 Ky Co cuisine
Ky Co Beach – inzvimbo yekunyudza iwe mune inoshamisa runako rwechisikigo
Ky Co inowanikwa anopfuura makiromita makumi maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweQuy Nhon pakati peguta. Iyi inoonekwa seyakanyanya kunakidza nzvimbo yekushanya muQuy Nhon ine mativi maviri akaganhurana negomo uye rimwe divi rakatarisa kugungwa. Yakakodzera kwazvo vanhu vanofamba nemudhudhudhu. Unogona kufamba nemota, asi kufamba nemudhudhudhu kunenge kuri nyore kushanya uye kuongorora nzvimbo ino.
Ky Co Beach iri munzvimbo yakakosha kwazvo (Mufananidzo ST)
Quy Nhon ine mamiriro ekunze ari pakati nepakati, saka unogona kuuya pano chero nguva yegore, asi kuti zvive nyore, unofanirwa kubva munaFebruary kusvika Nyamavhuvhu.Panguva ino, kunze kunotonhorera, mvura shoma inoita kuti zvive nyore kufamba uye visit.
Kuuya kuno, iwe uchave wakakurirwa nehukuru hwesango runako, hunhu hunopindirana. Wakamira kure, uchaona makomo makuru, miti yakasvibira ine mimvuri, mhepo ine mhepo, mhepo ine simba ichivhuvhuta pavanhu vakatakura munyu chaiwo womugungwa. Ky co ine arc kutungamira senge mwedzi mucrescent wemazuva akajairwa.
Natural swimming madziva mukati Ky Co beach Quy Nhon (Mufananidzo ST)
Iwe uchanzwa chinhu chinonakidza kana uchiuya kuKy Co beach iyo iri mvura pano inotonhorera uye haina kudzika. Iwe unogona kuzvidonhedza wakasununguka mumvura yejade, kushambira 100m kure asi mvura inongosvika kumutsipa wako. Jecha jena, rakapfava uye rakatsetseka, miti yakasvibira inotonhorera, mumvuri wekokonati yegirini yakaturikira pasi pejecha.
Chii chinonakidza kupfuura kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchikwesha mvura, unogona kufamba usina shangu pamiti yekokonati uye uchiimba zvishomanene nziyo dzorudo kugungwa. Chiitiko chose chinova chinopenya chichipenya pasi pechiedza chezuva. Ky Co beach yakanaka sechipfuva chepfuma chizere nematombo anokosha. Zuva rinopenya pagungwa rebhuruu rinopenya rinoratidzika sesirivha kubva kure, tsanga dzejecha dzakapenya semadhaimani maduku.
READ Bản đồ Miền Trung & Thông tin du lịch miền Trung | Excitinghochiminhcity
Matombo ari pano akabatanidzwa pamwe chete, kana mafashamu akwira, mvura inomhanya pakati pemapako ematombo iwayo kugadzira madziva ekugadzira anoyevedza. Mvura haina kudzika, asi inoita seinoda kubata uye kugarira mudombo, misikanzwa ichitamba ichimbundira mujinga megomo kunge vana vane misikanzwa.
Dziva rekushambira rekugadzira rinotonhorera, mvura yakachena, unogona kuona pasi pedziva. Dziva rekushambira rekugadzira rinogona kutakura vanhu 5-7. Yakanyanya kukodzera kuongororwa kwemhuri. Zvakare zvakachengeteka zvikuru kuti vana vadiki vatuhwine mariri.
Mapako akazarurwa mukati Ky Co beach kana mafashama adzika (Mufananidzo ST)
Mangwanani apo zuva richangobuda, mvura yegungwa yeKy Co yakaita bhuruu segirazi redenga. Iwe unogona kuenda kugungwa mangwanani kuti uone kunyura kwezuva kwerudo. Madonhwe edova akasara pamashizha aidonha achidonha mujecha rakanaka. Kunyarara, kunyarara, kunyarara. Zuva rakanga rakatsvuka, zvishoma nezvishoma richioneka kuseri kwemakore ane mhute. Zvikepe zvakasangana pagungwa nemimhanzi yezuva rakajeka uye rakanaka.
Kwete izvozvo zvoga, kunewo mawere nematombo makuru, kukwira kwaita sikweya tsoka, kunopinza kwairi kubuda pakati pegungwa seshongwe diki kana mapikisi ari kurovera mudenga. Kana mafungu adzika, nzira iri pamawere inobuda. Unogonawo kuenda kumawere akareba pedyo nemahombekombe kuti uende kunoshanyira gungwa. Kunyura mumvura inotonhorera, kutamba nemafungu, kutenderedza masora egungwa kuti abate mhuka diki dzegungwa.
Kunyanya, ndapota ronga kuti unakirwe zvizere Ky Co beach Quy Nhon nekuona makorari paBai Dua. Nzendo dzezvikepe kuenda kuPineapple Beach dzinofarirwa kwazvo, unogona kubvunza uye kuronga kusangana nevaridzi vezvikepe munzvimbo yemahombekombe pazuva rekutanga rekusvika kuti uve nehurongwa hwekuenda kuPineapple Beach nezuva rakajeka, kudzivirira mazuva ane makore. .
Ky Co mvura yegungwa yakajeka uye yebhuruu (Mufananidzo ST)
Iwe unongoda kugadzirira midziyo inodiwa senge bhachi rehupenyu, magirazi epabonde … unogona kushambira pamusoro pegungwa kuyemura kutaridzika kwegungwa nedenga uye neruvara rwecoral reef.
Vashanyi pano vanogona zvakare kuhaya zvikepe kana magwa kuti vaongorore gungwa uye kuenda kunobata hove. Kana kutevera vabati vehove kugungwa kuti vaone basa ravo remazuva ose rokuredza.
Nzira yekuenda sei kuKy Co beach?
Iri pedyo nemakiromita makumi maviri neshanu kubva kuQuy Nhon pakati peguta, Ky Co imahombekombe akasarudzika. Mhenderekedzo yegungwa yakakombama secrescent ine mativi matatu anoganhurana nemakomo uye 1 divi rakatarisa kugungwa. Naizvozvo, kuti uende kuKy Co beach, vashanyi vachafanira kupfuura nepakati pematanho maviri. Yekutanga ndeye yako yekutanga kuenda kuQuy Nhon guta. Yechipiri ndeyekubva pachiteshi chebhazi, pier, uye airport kuenda kuKy Co beach.
Nzira yekusvika sei kuKy Co beach
Muchikamu chino, ini ndichagovera nzira yekuenda kuQuy Nhon kubva kumaguta makuru maviri, Hanoi uye Ho Chi Minh. Kune dzakawanda nzira dzekufambisa kuenda kuQuy Nhon dzinogona kutariswa nevashanyi dzakadai se:
READ Top 10 Bình Giữ Nhiệt 1 Lít Của Nhật được ưa Chuộng | Excitinghochiminhcity
Kubva kuHanoi, Ho Chi Minh ane ndege yakananga kuPhu Cat airport (inenge 35km kubva kuQuy Nhon pakati peguta), saka vashanyi vanogona kufamba nyore pasina kushandisa nguva yakawanda. Nekudaro, mutengo wendege unochinja zvichienderana nemwaka, saka unofanirwa kubvunza nekungwarira usati watenga matikiti ekufambisa.
Phu Cat Airport inenge 35km kubva kuQuy Nhon pakati peguta
Chitima isarudzo yakachengeteka uye yakasununguka kune vafambi, kunyanya avo vane nguva uye vanoda kuchengetedza mari yakawanda. Vashanyi vanogona kusarudza kuenda kuDieu Tri chiteshi (anenge makiromita gumi nemashanu kubva kuQuy Nhon guta), vobva vatenga tikiti rekuenderera kuQuy Nhon chiteshi. Kana vashanyi muguta. Kubva kuHo Chi Minh Guta, kune chitima chinonanga kuQuy Nhon chiteshi, asi pane chitima chimwe chete pazuva.
Chitima kubva kuHanoi chiteshi kuenda kuQuy Nhon
Kana uchibva kuHanoi, unogona kusarudza bhazi rekurara kubva kuGiap Bat uye Nuoc Ngam zviteshi zvebhazi kuenda kuQuy Nhon chiteshi chebhazi. Kana ukakwira bhazi kubva kuSaigon, unofanira kusimuka kubva manheru emanheru apfuura kuti usvike kuQuy Nhon mangwanani-ngwanani anotevera. Parizvino, kune vazhinji vanofambisa mabhazi muSaigon vane akawanda sarudzo dzenguva, nzvimbo uye mutengo wevashanyi kusarudza kubva.
Kufamba kubva pachiteshi chebhazi, pier, airport kuenda kuKy Co beach
Kutanga kubva kunzvimbo, vashanyi vanoenda kuNhon Ly commune. Unogona kutevera mirairo yegoogle mepu kuti usvike kuThi Nai bhiriji, wozosangana nenzvimbo inotenderera, tendeuka kuruboshwe kuNhon Ly. Pano vashanyi vanogona kutamira kuKy Co nenyika kana gungwa.
Thi Nai Bridge – inzvimbo yakanaka yekutarisa inokwezva vashanyi
Kune avo vanoda ruzivo, munogona kusarudza kuva nemudhudhudhu kana kutora mota yemhuri kuti mukwanise kumira nekutarisa mune yakanaka mifananidzo munzira zvakanaka. Nekudaro, kana ukaenda kuKy Co nemugwagwa, haugone kusvuta paBai Dua, saka unofanirwa kufunga nezvesarudzo yako.
Kuchovha mudhudhudhu uchitevedza mugwagwa unotenderera gomo kuti usvike kuBai Ky Co
Kana iwe uchida kunzwa manzwiro ekuyangarara pamusoro pemasaisai uye kuyemura makomo makuru, saka iwe unofanirwa kusarudza kuenda kuKy Co negungwa. Kubva kuQuy Nhon, unoenda kuEo Gio muNhon Ly commune, wozokwira igwa kana chikepe kuenda kuKy Co beach. Kazhinji, igwa rinotora vashanyi paNhon Ly wharf, anenge maminetsi gumi nemashanu kusvika makumi maviri kuenda kuKy Co beach.
Chii chekutamba kuKy Co?
Ongorora Ky Co beach
Kana iwe wauya pano, iwe unofanirwa kunyatso kunyudza mumvura yakachena yebhuruu kuti unzwe kufara uye kushamisika kweKy Co beach. Yakatumidzwa kuti Maldives yeVietnam, Ky Co ine runako rwemusango runokwezva vanhu.
Mvura yebhuruu muKy Co beach
Kudzika musasa pamhenderekedzo yegungwa
Kune avo vanoda kuona uye kuongorora, kudzika musasa husiku paKy Co zvirokwazvo chichava chiitiko chisingakanganwike. Iwe unogona kuunza tende rako, zvimwe zvekudya uye wozosarudza zvakasarudzika zveNhon Ly beach yeBBQ pamhenderekedzo chaipo.
Kudzika musasa husiku muKy Co chiitiko chinonakidza kwazvo
Hapana chinhu chinoshamisa kupfuura kunakidzwa nekudya kunonaka, kuteerera kutinhira kwemafungu uye kunakidzwa nezvose zvinonaka zvegungwa.
Join mabasa pamhenderekedzo yegungwa
Pamusoro pekushambira, vashanyi vari pano vanogonawo kutora chikamu mumitambo nemitambo yakaitwa paKy Co beach yakadai separachute, jet ski, banana float, etc. Uye kana ukaenda neboka guru, Tinogonawo kuronga mitambo inonakidza yekuvaka timu. munhu wose.
Vashanyi vanofarira kutamba pagungwa
Tarisa muSuoi Ky Co Lake, Hang Yen Bridge
Kuzorora uye kutarisa muKy Co rukova dziva, Hang Yen zambuko chiitiko chinonakidza chausingafanire kupotsa kana uchiuya kuKy Co beach. Iro bhiriji rine akawanda akasarudzika mavara ane rimwe divi igomo uye rimwe racho gungwa zvakare rinofanira-kuona paKy Co Quy Nhon.
Kunaka kweHang Yen Bridge
Snorkeling kuona makorari
Vashanyi vanogona kutora chikamu mu scuba diving kuti vaone makorari, kufamba uye kuongorora mhuka nezvirimwa zviri pasi pegungwa. Zvechokwadi ichi chichava chiratidzo chakakosha murwendo rwako. Ita shuwa kuunza giya rekudzivirira uye kuchengetedzwa kwezuva paunenge uchi scuba diving. Ziva kuti nzvimbo dzine makorari akawanda dzinogona kuita kuti tsoka dzako dzitsemuke kana ukasangwarira, nyatsocherechedza kana kuti unogona kupfeka shangu dzekudhivha kuti dzive dzakachengeteka.
Iwe unogona kusangana nezvisikwa zvegungwa zvinonakidza pano
Eo Gio Travel
Eo Gio haisi kure neKy Co beach, saka vashanyi veKy Co havafanirwe kupotsa rwendo rwekuenda kuEo Gio. Isiri yakaderera kune chero yepakati pemhenderekedzo yegungwa, Eo Gio ane mvura yakachena yebhuruu pajecha regoridhe rinopenya. Zuva nezuva, masaisai airovera pamahombekombe ane matombo ane makomba, achipupuma furo jena agadzira mufananidzo wakanaka wegungwa. Kuuya kuEo Gio, usakanganwa kuona kufamba munzira yegungwa yekufamba pakati pemakomo makuru.
Vashanyi vauya kuKy Co havafanirwe kupotsa rwendo rwekuenda kuEo Gio
Ky Co cuisine
Paunenge uchienda kuKy Co, haugone kungozvinyudza iwe pachako mune yakanaka isina kurongeka yakasarudzika nzvimbo asi zvakare kunakidzwa zvakanyanya zvinonaka zvehunyanzvi. Kunyanya madhishi emugungwa akanyanya kutsva, anogadziriswa achangobata kuchengetedza kunaka kwekudya kwegungwa. Iwe haugone kupotsa zvinonaka zvemugungwa ndiro pano se: abalone, sun-dified squid, fresh squid, sea crab, lobster, urchin… nemitengo chete kubva pa280,000 kusvika 330,000 dish.
Grilled Noodles: Kana uchiuya kuQuy Nhon beach, unofanira kunge wakanzwa kana kuravira ndiro iyi. Nekudaro, inofanirwa kunakidzwa paKy Co chitsuwa kuti inakidze. Chii chinonakidza kupfuura apo mhuri yose inogara pajecha, mhepo inotonhorera yegungwa inovhuvhuta kumeso, inoungana nemhuri kuti igochera uye kunakidzwa pagungwa chaipo.
Urchin yemugungwa inonaka kwazvo, nyama idiki asi yakasimba, nyama inonamatirana semaranjisi. Nhum inobatwa, hafu, yakacheneswa nyama, yakabviswa dumbu remarinated yekubika. Thit Nhum inotonhorera uye inonaka. Inokwezva vashanyi.
Mhando dzehozhwa dzakagochwa: Kunhuhwirira kwehozhwa dzakagochwa kunopa kunhuhwirira kunofadza, zvichiita kuti vashanyi vanzwe nzara nokungonzwa kunhuwidza. Hozhwa dzemugungwa dzinogona kugadzirwa kuita ndiro dzakawanda dzinonaka dzakagochwa.
Abalone: Abalone porridge isarudzo yakanaka kwauri. Porridge inotapira, inopisa, yakapfuma mune zvinovaka muviri. Icho chipo chinokosha icho zvisikwa zvinopa pano.
Chinhu chakakosha pakuzvivaraidza kuenda parwendo nechikepe cheshenjere kunoredza squid nyoro. Wobva wagadzira nemaoko squid inonaka, inakidzwa nemichero yemaoko avo.
Ky Co beach inzvimbo yakakodzera yevashanyi yekufamba kwemhuri uye kunakidzwa kwemhuri. Wagadzirira here kuenda kuBai Ky Co Quy Nhon? Vntrip.vn anotenda kuti chero munhu akamboshanyira Ky Co beach achagara aine chido chekudzoka pano, kunyudzwa mumvura yebhuruu zvakare, kuti anakidzwe nezororo separadhiso mugungwa iri.
← Kỹ thuật chiết cành cây ăn quả nhanh ra rễ, đạt tỉ lệ thành công cao | Excitinghochiminhcity
Top 7 món ăn ngon từ thịt thỏ và cách làm đơn giản tại nhà | Excitinghochiminhcity →